Resadresaka nifanaovana tamin’i Andy Carvin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, Ελληνικά, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Ho an'ny mpiserasera twitter 40 000 sy ireo mpikaroka vaovao avy amin'ny loharanom-baovao misy eo an-toerana izay tsy mitsaha-mitombo dia i Andy Carvin no fijanonana voalohany ao amin'ny twitter raha hijery vaovao manerana ny ilany andrefana sy avaratry Afrika. Manam-pahaizana manokana momba ny tetik'ady ao ami'nny NPR , nanakaiky hatrany ny media sosialy i Carvin – tsindriana manokana amin'izany ny twitter – satria io no tahaka ny filazam-baovao manara-potoana.
Niasa efa hatramin'ny ela ho an'ny Global Voices i Carvin, noho izany tsy manavao azy ny asa ataontsika, sady efa fantany hatramin'ny ela ny lanjan'ny asa fanaovan-gazety. Tamin'ny volana febroary nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'i Ethan Zuckerman, notsindriany tamin'izany ny maha-zava-dehibe ny “fitondrana olona any an-toerana hitantara ny zava-nisy tahaka ny hoe nanatri-maso teo ry zareo.”
Fanontaniana napetraky ny ekipan'ny Global Voices avy any andrefana sy avaratry Afrika no hita ao amin'ity resadresaka ity.
Inona no fitaovana ampiasainao rehefa hiserasera twitter, ary inona no tsapanao fa banga amin'izany fitaovana izany?
Amin'izao fotoana izao dia ireo fitaovana ankapobeny rehetra no ampiasaiko – tweetdeck, fanaovana fikarohana amin'ny twitter, sy ny sisa. Rehefa fantatro ny hoe iza no hotadiaviko sy ny hoe mifandraika amin'ny inona dia tsy misy dikany loatra ny fitaovana ampiasaina fa ampy izany rehefa ahazoako mandamina ny fampiasako twitter. Misy fitaovana mba tiako ananana ihany anefa, tahaka ny hoe ireo izay afaka manampy ahy hitantanako ny fahabetsahan'ny @ mamaly ahy, izay matetika sarotra amiko ny mamantatra ny olona te hiresaka amiko fotsiny sy ny olona manome fijery vaovao ho ahy.
Efa manomboka mahazatra ankehitriny ny media sosialy eo amin'ny tontolon'ny media; mahita fiovana hatrany amin'ny fotony ve ianao amin'ny fomba famoahana vaovao, indrindra ny vaovao maneran-tany?
Ataoko fa mamirapiratra tokoa ny lohatenim-baovao any amin'ny media sosialy raha ny iraisam-pirenena no jerena, satria na dia ireo media matanjaka indrindra aza tsy manana olona afaka miparitaka etsy sy eroa amin'ny fotoana iray. taorian'ilay tsunami vita noely, tsy nahazoana vaovao tanteraka amin'ny fotoana rehetra ny toerana sasany tahaka an'i Maldives sy ny nosy Andaman, noho izany dia tena nilaina ny fanangonam-baovao tany amin'ny olona nahalalana ny tena zava-nisy marina. miaraka amin'ny twitter sy ny tranonkala tahaka ny YouTube ohatra, dia tena azo antoka tsara ny mahazo endrika hafa amin'ny vaovao rehetra miseho manerana ny tany rehetra iay afaka mahita aterineto. Ary raha mila fanampiana ianao, tsy takatry ny sainao ny isan'ny olona avy amin'ireny toerana ireny te hanampy anao amin'ny fanaparitahana vaovao.
sarin-i Andy Carvin an-i Jamie Reinsch
Hitanay fa nanadihady momba ny fihetseham-bahoaka ianao tany Tonizia, Ejipta, Libia, Baraina, ary izao koa i Siria. Matetika ianao no mizara sary sy lahatsary avy any an-toerana. Tsy mahatsiaro tena ho leo sy reraka ve ianao amin'ny famoahana vaovao mandratra fo tahaka ireny?
Mazava ho azy, tena sarotra be indraindray, indrindra rehefa misy lahatsary na tantara mikasika ankizy maratra. Manan-janaka kely anankiroa aho ka rehefa mahita ankizy mitovy taona aminy tafahitsoka ao afovoan'ny afo toy ireny aho dia tena mandratra ahy tokoa. Tahaka izany ihany, raha vao mahita olona mpiserasera twitter misy manafika ianao, dia tena koditra mihitsy, satria tsy maintsy manao sary an-tsaina ny zava-niseho ianao, ary matetika ohatry ny tena mafy kokoa noho ny tena zava-nisy ny ao an-dohanao ao. Kanefa efa fantatro izao hoe rehefa inona aho no afaka manalavitra ny solosainako sy ny iPhone-ko. Ny zavatra tiako atao farany izao dia ny mandoro azy avy eo miala amin'izay kanefa mbola tsy ho ato ho ato aloha izany.
Hitanay fa tsy mijanona manana finiavana handray andraikitra hatrany ianao amin'izay zavatra rehetra ataonao – avy aiza no nahatonga izany? Vokatry ny fanaovanao ity asa ity ve sa ny mifamadika amin'izay?
Sarotra ny tena mamantatra izany. Anisan'ireny angamba ny hoe adalam-baovao aho, ary tena manaraka akaiky ny zava-misy eto amin'ny faritra aho satria ohatry ny hoe izay no antom-pisiana. Fa efa niasa antserasera foana koa aho nandritra ny taona maro rehefa misy loza voa-janahary, anisan'izany ny 9/11, ny rivo-doza Katrina, ny horohorontany tany Haiti. Noho izany dia fantatro fa manana filana goavana aho hiaina rehefa misy zavatra mitovy amin'ireny.
Tany Ejipta sy Baraina, moramora kokoa no nahazoana mpiserasera twitter. Any Libia sy Yemen kosa, ohatra, dia somary sarotra. Ahoana no fomba ataonao hifaneraserana amin'ny media sosialy any amin'ny firenena tsy dia marisika loatra mampiasa azy ireny?
Tena sarotra. Tsy misy olom-pantatro manokana any amin'ireny firenena ireny, noho izany dia miezaka aho hanana fifandraisana an-tserasera amin'ny terantany monina any Etazonia amin'ny alalan'ny herin'ny tanako manokana. Vetivety ihany aho dia mahita olona miresaka amiko ary manome ny hevitr'izy ireo ny amin'izay olona mpiserasera isaky ny firenena. Raha eo amin'ny lafiny fikarohana momba ny lohahevitra indray dia mora tsy araka ny eritreretanareo azy. Fitaovana tena ahitanao sary sy sary miaina betsaka indrindra ny facebook, tahaka ny YouTube ihany, mila mahafantatra fotsiny ianao hoe aiza no tokony ahitana azy .
Araka ny efa nambaranao teo, dia sarotra ny fahazoana loharanom-baovao any amin'ny firenena sasany, ka tsy maintsy mikaroka izany amin'ny fomba hafa ianao, mino ve ianao fa misy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny vaovao avoakanao izany? Impiry izao ianao no namoaka fanadihadihana mikasika firenena iray tamin'ny loharanom-baovao azonao tany ivelan'io firenena io?
Arakaraka! Ohatra, ny Libiana mifanerasera antserasera amiko izao tsy monina any Libia ny ankabeazany, satria ireo Libiana monina any Libia efa tsy afaka intsony fa efa tapaka ny fifandraisana an-terinety any aminy. Mandany ny androny amin'ny fiantsoana amin'ny finday izy ireo hahazoana ny vaovao farany avy any amin'ireo olona tena monina any an-toerana. Mazava ho azy fa tsy tena vaovao intsony ny vaovao azoko ka mampisalasala ahy ihany ny fahamarinany, kanefa amin'ny ankapobeny dia mahagaga ahy foana ny fahamarinan'ny vaovao omen'izy ireny. Fanampin'izay koa, mandray anjara amin'ny hetsika fanoherana foana matetika ny teratany monina ivelan'ny fireneny, satria izy ireo efa any ivelany. Izy ireo no afaka manome vaovao betsaka sy hevitra maro rehefa lavitry ny tanindrazany.
Raha jerena ny hamaroan'ny vaovao voarainao amin'ny fotoana iray, inona no sivana ataonao hifantenana izay vaovao tokony havoakanao ho anay?
Arakaraka. Ohatra, raha misy trangan-javatra goavana miseho, toy ny hoe mitifitra mpanao fihetsiketsehana ny polisy, dia miezaka aho mitady olona nanatri-maso ny zava-niseho hijoro vavolombelona. Raha toa ka tezitra indray ny olona ka mamoaka fihetseham-po mifanaraka amin'izay dia averiko any amin'ny twitter indray aloha ny resaka ka any aho no manakambana azy, mamaky ny zavatra lazain'ny rehetra tahaka ny mamaky tantara. Ka rehefa mahita zavatra mahaliana ahy aho ao anatin'izany rehetra izany, dia izay vao avoakako. Kanefa ny zava-dehibe ataoko dia ny mamoaka ny vaovao rehetra any amin'ny twitter aloha hitadiavana ny tena fahamarinany, ary mangataka ny olona aho hanampy ahy amin'izany. Olona isan-karazany no miaraka amiko amin'izany ka manampy ahy hanavaka ny marina amin'ny foronina, satria marobe ny olona manaraka ahy ao amin'ny twitter ary misy amin'izy ireny tena avy any amin'ilay toerana na manam-pahaizana manokana mihitsy aza momba ny zavatra resahana.
Ny anao ny tweets no ahitana zava-baovao indrindra amin'izay rehetra efa hitanay. Rehefa miserasera amin'ny twitter ianao na mamerina resaka ao amin'ny twitter, efa nieritreritra ny amin'izay fomba hitantaranao azy avy amin'ny fahabetsahan'ny tweets ve ianao?
Izay indrindra. raha jerenareo izao ny fomba niresahako tamin'ny tweet an'i Tonizia, dia hitako hoe tahaka ny endrika literatiora no nanaovako azy, avy amin'ny famonoan-tenan'i Bouazizi hatramin'ny nandosiran'i Ben Ali ny fireneny. Tiako ny manindry tsara ny zava-miafina tsy mbola hita hampiakarana ny hetaheta hahalala ny farany mandritra ny fisehoan-javatra rehetra, ary mampiasa ny Storify aho amin'izany hitehirizako azy rehetra. hatramin'izay nisian'ny fanoherana niara-niseho tany amin'ireo firenena maro izay dia miezaka fotsiny aho hitazona izay heveriko fa tsara araka izay tratrako, ary mba hahazoak antoka ny amin'izany dia omeko endrika olombelona irey ny zavatra mitranga any amin'ny isam-pirenena.
Ahoana no fomba ataonao hitantanana ny eo amin'ny fiteny? Miaraka amin'ny mpandika teny hafa ve ianao sa mampiasa fitaovana fandikana teny (sa izy roa)?
Ho an'ny lahatsoratra dia mampiasa fitaovana fandikana teny aho, izay manome ahy ny tena ilaiko amin'izay zavatra hoteneniko. raha sary miaina kosa na ny mitovy aminy, dia mangataka fanampiana any amin'ireo mpiserasera twitter mpanaraka ahy aho. Amin'ny ankapobeny dia eo ho eo amin'ny 20 minitra eo no laniko rehefa mandika teny , ary matetika misy mpilatsaka an-tsitrapo foana miara-miasa amiko ka manoro ahy izay tokony holazaina rehefa misy dikanteny manokana sady maka sary miaina koa. Tena mahafinaritra be ery ny fitiavan'ny olona manome ny fotoanany sy ny fahaizany; tsy vitako izay tokony hataoko raha tsy misy ny fanampian'izy ireo.
Efa nisy nanaitra anao ve ny valiny voarainao nandritra ny niseraseranao twitter?
Tena tsy ampoiziko mihitsy indraindray rehefa olona malaza be no mamaly ahy, ohatra hoe ny masoivohon'ny Firenena Mikambana, na ilay mpilalao ao amin'ny NFL malaza be Chad Ochicinco. Fa ny tena lehibe indrindra dia maniry ahy hahomby hatrany ireo mpanaraka ahy ao amin'ny twitter, ary manaraka ny momba ahy. Ampahatsiahiviny ahy fa tokony hatory amin'izay aho, hihinan-kanina, hanokana fotoana ho an'ny ankohonako. Tena mijery ny momba ahy mihitsy izy ireo.
Ary mazava hoa azy, tianay ho fantatra : ahoana no fiheveranao ny Global Voices?
Ankehitriny, izaho no anankiray amin'ireo niasa ho an'ny Global Voicies ela indrindra, ivereno ny tamin'ny desambra 2004:
Tamin'izany fotoana izany, dia nivezivezy eran-tany aho, ka ny Global Voices no fomba nahomby ho ahy nizarako ny lahatsoratro tao amin'ny bilaogy, podcsts sy ny sary miaina. Izy no nanjary loharano ho ahy nahazoako nanaraka antserasera ny zavatra miseho rehetra manerana ny tany nanomboka hatreo. Tsy nataoko mihitsy angamba izao zavatra nataoko izao raha tsy teo ny Global Voices, toy ny efa nahazoako mpifanerasera tamiko koa tany Tonizia sy Ejipta avy amin'ny alalan'ny tontolo Global Voices.
Isaorantsika i Andy Carvin.